माता श्रीपलान्चोक भगवतीले सबैको रक्षा गरुन, आइतबार माघ ७ गते/जनवरी २१ को राशिफल « Pana Khabar
माता श्रीपलान्चोक भगवतीले सबैको रक्षा गरुन, आइतबार माघ ७ गते/जनवरी २१ को राशिफल
प्रकाशित मिति : Jan 20, 2018
समय : 11:52 pm
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल माघ ७ गते आईतबार इश्वी सन २०१८ जनवरी २१ तारीख माघशुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथी प्रातः १२ः४७ बजे सम्म पश्चात पञ्चमी तिथी चन्द्रमा कुम्भ राशिमा सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
हरकोहिको पुर्ण बिश्वास नगर्नु होला धोका हुन सक्छ । बाणिमा मधुरता छाउनेछ । नयाँ कामको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ । मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ ।
मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त नहुनाले मनमा चन्चलताको बास रहला । पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । कष्टकर यात्राको कारणले शारिरिक आलस्यता ले सताउला । पठनपाठनको क्षेत्र भने त्यति राम्रो नरहला ।
यात्राकारक दिन रहेकोछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झन्जट सहनु पर्ला । अरुको बसमा गरीएको कार्यले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ ।
शारीरिक अस्वस्थाका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । मान्य जनको साथ सहयोग पुर्ण रुपमा प्राप्त नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । माल सामान को क्षति ब्यहोर्नू पर्ला सजग रहनु होला ।
प्रेमी प्रेमिकाको बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्छ । ब्यापार ब्यवसाय को क्षेत्रमा मध्यम दिन रहेको छ । तपाईले कसैमाथी गरेको बिश्वासमा बिश्वसघात हुन सक्छ । सामान्य यात्रा रहला । निणर्य गर्ने क्षमतामा कमी आउन सक्छ ।
तपाईका शुभ चिन्तक हरुको सङख्या बढ्नेछ भने शत्रुपक्क्ष कमजोर हुनाले बिघ्नबाधाहरु हट्नेछन् । स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य असर भोग्नु पर्ला । आजको सामान्य खर्चले भोलिलाई फाईदा मुलक हुनेछ ।
पठनपाठनको क्षेत्र भने अधुरो रहनेछ । पारीवारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । साझेदारी कामको आम्दानि भने उत्तम रहनेछ । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ ।
परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ । प्रतिस्ठीत ब्यक्तिहरुको सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहेतापनि अरुको अनुशरण गर्दा प्रिय ब्यक्तिहरु टाढीन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
मित्रजनको साथ सहयोग भरपुर रहनेछ । पराक्रममा बृद्यि हुनेछ । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्र भने राम्रो रहेको छ । कुराकाट्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ ।
बोलिको कारण आफन्तजनहरु रुष्ट रहन सक्छन् । दीर्घकालिन फाईदा मुलक काममा लगानि लगाउने राम्रो समय रहेको छ तर तत्कालिक आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ ।
साजेदारी काममा हात नहाले कै बेस रहने छ । शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ । साधारण चोट पटक लाग्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । प्रेमी प्रेमीका बिच खट्पट रहन सक्छ । सामान्य यात्राले मन बैचैन रहला ।
मित्रजनहरुको लागी साधारण खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । खराब संंगतको कारणले सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । ब्यापार ब्यवसायमा सामान्यतय हानि रहन सक्ने छ । कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ ।
बरिष्ठ गायक गुरुङले भने – ‪एक मात्र निष्ठावान सत्याग्रही ‬ ‪डा. गोविन्द केसीको साथ छु… रहनेछु…
८ वर्षीया बालिकालाई पानी माग्ने निहुँमा बलात्कार
ऐँंसेलु बेचेरै करोड आम्दानी
जिल्ला अदालत धनकुटाको छतमा दिंउँसै “दारु पार्टी” को भिडियो सार्वजनिक भएपछि मच्चियो हङ्गामा !
बोको र भाले चढाउने सर्तमा सडक र ढल निर्माण
श्री पाथीभरा माताको कृपाले यो साता असार २९ देखि साउन ३ गतेसम्मको राशिफल यस्तो छ
सुत्दा केही थिएन, उठ्दा खेतमै भीमकाय विमान
डेस्च्याम्पसको कीर्तिमान, खेलाडी र प्रशिक्षकको भूमिकामा विश्वकप
एम्बाप्पे उत्कष्ट युवा खेलाडी, लुका मोडरिचले जिते गोल्डन बल
सांसद लामा एकपछि अर्को विवादमा, यस्ता छन हर्कतहरु
कविता नसुन्ने त भैँसी हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
विश्वकप फुटबलको उपाधि फ्रान्सलाई, क्रोएसिया ४–२ ले पराजित
डा केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ : उपनेता गच्छदार